सावधान ! मात्र १३ घण्टामा करिब ३७ हजारपटक चट्याङ्ग, बच्न यस्ता उपाय अपनाउनुस् | Rajmarga
सावधान ! मात्र १३ घण्टामा करिब ३७ हजारपटक चट्याङ्ग, बच्न यस्ता उपाय अपनाउनुस्
भारतमा हरेक वर्ष चट्याङ्ग पर्ने गर्दछ । नेपालमा पनि यसको कुनै कमी छैन । जसमा भारतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि धेरैले ज्यान गमाउने गरेका छन् ।
तर,दक्षिणी भारतको आन्ध्र प्रदेशमा यो साता चट्याङ्गले रेकर्ड तोडेको छ। अधिकारीहरुका अनुसार आन्ध्र प्रदेशमा मंगलबारका दिन मात्र १३ घण्टामा ३६ हजार ७ सय ४९ पटक चट्याङ्ग प-यो ।
थप जानकारीका लागि यो समाचार पनि पढ्नुस
Previous post: यस्तो रहेछ सुन काण्डमा गोरे-प्रहरी ‘कनेक्सन’
Next post: के मानिसहरु सोच्नेभन्दा बढी हाँस्छन् ? यस्तो रहेछ हाँस्नुको कारण